ဘဝမှတ်တိုင်: July 2016
တစ်ခုပဲ လုပ်ပေးရမှာပါ ဘာလဲ ဆိုတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ -
သုံးလို့ ပီးသွားရင် ဖြည်ချထားတဲ့ ဖိုင်ကို ဖျက်လိုက်ပေါ့ . zip ကိုတော့ထားထားပေါ့
- 85.4 MB
- 41.5 MB
- 84.9 MB
Special Credit ===> Min Oaker
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/21/2016 12:08:00 am0comments
Samsung Galaxy Note4SM-N910T ဖုန်းကို TWRP Recovery ထည့်သွင်နည်း -
Samsung Galaxy Note4SM-N910T ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ညီအကိုများအတွက်
TWRP Recovery ထည့်သွင်နည်း ကို Update New အဖြစ် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းအတွက် မကြာသေးမှီက ထွက်ရှိထားတဲ့ Android 6.0.1 Marshmallow ဗားရှင်းကို
Root လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းမှာ Custom Recovery ကိုအရင်ဦးဆုံး ထည့်သွင်း
ဒီဖုန်းအတွက် TWRP Recovery File ကထွက်ရှိနေပါပြီ တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းကို Root လုပ်ဖို့
ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ယခုဖေါ်ပြပါ Custom Recovery ထည့်သွင်းယူနည်းကို အောက်ပါ
TWRP Recovery for the Samsung Galaxy Note4SM-N910T
TWRP Recovery ထည့်သွင်းနည်း
၁။ ဖုန်းမှာ OEM & USB Debugging mode ကိုဖွင့်ထားပါ
၂။ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Odin zip ဖိုင်ကိုဖြည့်လိုက်ပါ
၃။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ twrp recovery.zip ဖိုင်ကိုတော့
လုံးဝ zip ဖိုင်မဖြည်ပါနဲ့ ဒီအတိုင်းထားပါ
၄။ Odin ကိုဖွင့်ပါ AP or PDA ဆိုတဲ့နေရာကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီး
ဒေါင်းလော့ရယူထားတဲ့ twrp recovery.zip ဖိုင်ကိုထည့်လိုက်ပါ။
၅။ ပြီးရင် ဖုန်းကို Download mode သွင်းလိုက်ပါ။
၆။ ဖုန်းမှာ Download mode ၀င်ပြီဆိုရင်တော့ computer နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
၇။ Odin Flash Tool တွင် auto reboot ဆိုတဲ့နေရာမှ အမှန်ခြစ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ။
၈။ Odin မှ ဖုန်းကိုသိပြီဆိုရင် Start ဆိုတာလေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၉။ Process တစ်ခုပြီးအောင်စောင့်နေလိုက်ပြီး Odin မှာ အောင်မြင်ကြောင်း
PASS ပြတဲ့အခါ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ USB ကြိုးကို ဖြုတ်လိုက်ပါ။
၁၀။ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး Volume Up + Home+ Power ကီးများကို
တွဲနှိပ်ပြီး Custom Recovery Mode သို့ဝင်ကြည့်လိုက်ပါ။
၁၁။ Team win twrp recovery screen ဖြင့်တက်လာခဲ့ရင်တော့
သင့်ဖုန်းမှာ Twrp Recovery ထည့်သွင်းပြီးပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/20/2016 11:59:00 pm0comments
Samsung Galaxy Note4SM-N910T ဖုန်းဗားရှင်း Android 6.0.1 Marshmallow Root လုပ်နည်း- by CHAN LAY (MCMM)
Samsung Galaxy Note4SM-N910T ဖုန်းဗားရှင်းကို Root လုပ်ချင်နေကြတဲ့ညီအကိုတွေအတွက်
Android 6.0.1 Marshmallow Root လုပ်နည်း Update New ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်း ဗားရှင်း Android 6.0.1 Marshmallow ကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
သင့်ဖုန်းမှာ Custom Recovery ကိုထည့်သွင်းပေးထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Custom Recovery ကိုထည့်သွင်းထားပါမှ SuperSu.zip ဖိုင်ဖြင့်
Recovery Mode မှ အလွယ်တကူ Flash ပေးပြီး Root access ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
#ဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းသည် Galaxy Note4SM-N910T အတွက်သာ
သီးသန့်ဖြစ်ပြီး တစ်ခြား Device များကိုထည့်သွင်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါရန်။
#ဖုန်းကို Root လုပ်ခြင်းသည် ဖုန်း၏ warranty ကို ပျစ်စေနိုင်ပါတယ်။
#Root ရန်အတွက် Instruction ကိုအတိုင်းပြုလုပ်ပါရန်။
#မိမိဖုန်းမှာ Brick တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့သော် ဇူးနစ်(နည်းပညာ)မှ တာဝန်မယူပါ။
#ဖုန်းက erase ဖြစ်နိုင်တာမို့ Backup ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
#ဖုန်းမှာ ဘက်ထရီအား အနည်းဆုံး 50-60% charge ရှိနေရပါမည်။
Root လုပ်ခြင်း၏ ကောင်းကျိုးအချို့
၁။ သင့်ဖုန်းကို Custom Rom & Kernel များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
၂။ Ads များကို Block ပြုလုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
၃။ Performance နှင့် battery life အပါအ၀င်
background process များကို စိတ်ကြိုက် စီမံထားနိုင်ပါတယ်။
၄။ Titanium Backup စတဲ့ Data recovery apps များကို အသုံးပြုပြီး
apps and data များကို Backup & Restore အလွယ်ပြုလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၅။ မလိုအပ်တဲ့ apps များနဲ့ bloatware ဆော့ဝဲများကို
အလွယ်တကူ uninstall ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ ဖုန်းမှာ Custom Recovery ထည့်သွင်းထားရမည်။
Samsung Galaxy Note4SM-N910T ဖုန်းကို TWRP Recovery ထည့်သွင်နည်း
SuperSU-update.zip ဖြင့် Root ပြုလုပ်နည်း
၁။ ဖုန်းမှာ OEM & USB Debugging mode ကိုဖွင့်ထားပါ။
၂။ SuperSU-update.zip ဖိုင်အား SD card ထဲသို့ ထည့်ပါ။
၃။ ဖုန်းမှာ Volume Up + Home + power ကိုတွဲနှိပ်ပေးပြီး
Custom Recovery mode သို့ဝင်လိုက်ပါ။
၄။ Custom Recovery mode တွင် Nandroid Backup ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါ။
(ဒီအတွက် Backup ဆိုတာကို နှိပ်ပေးပြီး Backup လုပ်ထားရုံပါပဲ၊ ဖုန်းမှာ အကြောင်းကြောင့်
တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ နဂိုမူလ Stock Rom နဲ့ Custom Recovery ထည့်သွင်းထားပြီးသား
အနေအထားအားလုံးကို အလွယ်တကူ Restore ပြုလုပ်ယူနိုင်ပါတယ်)
၅။ Custom Recovery mode တွင် Install ကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။
၆။ SuperSU-update.zip အား install လုပ်ပြီး Reboot ချပေးလိုက်ပါ။
၇။ ပါဝါပွင့်ပြီးပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိနေပါပြီ။
၈။ RootChecker ဖြင့်စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/20/2016 11:58:00 pm0comments
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F ဖုန်းဗားရှင်း Android 5.0.2 Root လုပ်နည်း- by CHAN LAY (MCMM)
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530F ဖုန်းဗားရှင်း
Android 5.0.2 ကို Root လုပ်ချင်ကြတဲ့ ညီအကိုတွေအတွက်ပါ
ဒီဖုန်းကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ CF-Auto-Root Tool ဖြင့်
Odin မှ One Click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပြီး အလွယ်တကူ ဖောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းအတွက် CF-Auto-Root ဖိုင်က ထွက်နေခဲ့တာ နည်းနည်းကြာနေပါပြီ
တင်ပေးမယ်နဲ့ အလှည့်မရောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ အခုချိန်ထိ Root access
မရှိသေးတဲ့ ဘော်ဒါတွေကတော့ Root File ကို အောက်ကလင့်မှာရယူလိုက်ပြီး
Root လုပ်နည်းကိုပါ ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/20/2016 11:56:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/20/2016 11:53:00 pm0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/14/2016 07:31:00 am0comments
YU Yunique ဖုန်းကို bootloader unlock ပြုလုပ်နည်း -
YU Yunique ဖုန်းကို bootloader unlock ပြုလုပ်ချင်တဲ့
ညီအကိုတွေအတွက် Update New ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိဖုန်းကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဖုန်းအတွက် ပထမဆုံး
Step ကတော့ Bootloader Unlock ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းမှာ Bootloader Unlock ပြုလုပ်ပြီးရင်တော့ Custom Recovery ကို
ထည့်သွင်းရပါမယ်၊ ပြီးတော့ Rooting Process ကိုစတင်နိုင်မှာပါ။
မိမိဖုန်းကို Rooting process တစ်ခုပြုလုပ်လို့ပဲပဲဖြစ်ဖြစ်
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် Brick ဖြစ်ခဲ့သော် ဇူးနစ်(နည်းပညာ) မှ
ဖေါ်ပြပါ လမ်းညွှန်သည် ပြည့်စုံမှု မပြည့်စုံမှုထက် Root ရန်အတွက်
မိမိရဲ့ OWN Risk အပေါ်မှာသာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
Download Here ADB & Fastboot Zip
၁။ ကွန်ပျူတာမှာ ADB and Fastboot အတွက် Driver ကိုထည့်သွင်းထားပါ။
၂။ ADB and Fastboot ကိုဒေါင်းလော့ရယူပြီး zip ဖြည်လိုက်ပါ။
၃။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
၄။ Fastboot Folder ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး Shift key and right-click တစ်ချက်ထောက်ပြီး
“openanew command window here” ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၅။ အောက်ပါစာကြောင်းကို ထပ်ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုခေါက်ပါ။
၆။ ဖုန်းမှာ Fastboot mode သို့ရောက်သွားတဲ့အခါ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်မှု
အဆင်ပြေ မပြေ အောက်ပါ Command ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
“fastboot oem device-info”
၇။ အောက်ပါ စာကြောင်းကို မှန်အောင်ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါ
၈။ ဖုန်းမှာ Unlocking Process ပြီးသွားတဲ့အခါ ဖုန်းကို
Reboot ချပေးလိုက်ပါ၊ ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းက
Bootloader Unlock ဖုန်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/14/2016 07:27:00 am0comments
Huawei P9 Lite ဖုန်းကို bootloader unlock ပြုလုပ်နည်း by CHAN LAY (MCMM)
Huawei P9 Lite ဖုန်းကို bootloader unlock ပြုလုပ်ချင်တဲ့
ညီအကိုများအတွက် Update New ကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ဖုန်း Huawei P9 Lite ကို Root လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
ပထမဆုံး သင့်ဖုန်းကို ပြုလုပ်ပေးရမယ့် Step ကတော့ Bootloader Unlok ပါပဲ
ပြီးတော့မှ Custom Recovery ထည့်သွင်းဖို့ ကြိုစားရပါဦးမယ်၊ အဲဒီ Step နှစ်ခုကို
အောင်မြင်စွာဖြင့် ကျော်ဖြတ်ပြီးပါမှ သင့်ဖုန်းကို Root အလွယ် လုပ်ယူနိုင်မှာပါ။
အထက်ဖေါ်ပြပါအတိုင်း သင့်ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းကို
ပထမဆုံး လေ့လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။
၁။ Hi Suite ကိုဒေါင်းလော့ရယူပြီး ကွန်ပျူတာတွင် ထည့်သွင်းပါ။
၂။ SRK Tool ကို ဒေါင်းလော့ရယူပါ။
၃။ ကွန်ပျူတာ လိုအပ်ပါမည်။
၄။ ဖေါ်ပြပါနည်းလမ်းသည် Huawei P9 Lite ဖုန်းအတွက်
သာဖြစ်ပါတယ် တစ်ခြား Device များအတွက် မဟုတ်ပါ။
Download SRK Tool
၁။ ကွန်ပျူတာတွင် လိုအပ်မယ့် USB Driver ကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါ။
၂။ တကယ်လို့ Huawei Official account ဖွင့်လှစ်ထားတာမျိုးမရှိသေးရင်တော့
အောက်ပါ Web သို့သွားလိုက်ပြီး Free account တစ်ခု Register တင်ယူလိုက်ပါ။
(အကောက်ဖွင့်တဲ့အချိန် English Version ဖြင့် ဖွင့်ပါ)
၃။ အကောက်တစ်ခုဖွင့်ပြီးတဲ့အခါ အောက်ပါပုံအတိုင်း Unlock ပြုလုပ်
နိုင်မယ့် Information Page ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊ လိုအပ်တာများကို
ဖြည့်စွက်ပြီး Summit ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
တကယ်လို့ မလုပ်တတ်သေးရင်တော့ အောက်ပါလင့်တွင်
Huawei ဖုန်းများကို bootloader unlock ပြုလုပ်နည်းစာအုပ်
၄။ Official မှ ပို့ပေးလာတဲ့ Unlock Code ကို Notepad ဖြင့်ဖွင့်လိုက်ပါ။
၅။ ဖုန်းမှာ Settings > Developer Options > မှ OEM Unlock ကို Enable ပြုလုပ်ပါ။
၆။ Settings > Developer Options > USB Debugging ကိုလည်း Enable ပြုလုပ်ပါ။
၇။ ဒေါင်းလော့ရလာတဲ့ SRK Tool zip ဖိုင်ကို ဖြည်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။
၈။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်နေရတဲ့အခါ Enter Key ကိုနှစ်ချက်ခေါက်လိုက်ပါ။
၉။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Main Feature Option မြင်နေရတဲ့အခါ
1. Unlock boot loader ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကီးဘုတ်မှ "1" ကိုနှိပ်ပြီး Enter ကိုခေါက်လိုက်ပါ။
၁၀။ အောက်ပါပုံအတိုင်း "Y" ကိုထပ်နှိပ်ပြီး Enter ကိုထပ်ခေါက်ပါ။
၁၁။ အောက်ပါပုံအတိုင်း bootloader Code ရှိလားမေးလာတဲ့အခါ
"Y" ကိုထပ်ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ကိုပဲထပ်ခေါက်ချပေးလိုက်ပါ။
၁၂။ ဖုန်းမှာ Fastboot Mode သို့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် စောင့်နေလိုက်ပါ။
၁၃။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်နေရတဲ့အခါ Enter ကိုထပ်ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
၁၄။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Enter your bootloader Code : ဆိုပြီးမြင်နေရရင်တော့
Notepad ဖြင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Official မှ ချပေးလာတဲ့ Unlock Code များကို Copy ကူး
ယူပြီး Pate လုပ်ပေးလိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Enter ကိုထပ်ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
၁၅။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ရှေ့ဆက်အလုပ်လုပ်မှာ သေချာလားဆိုပြီးမေးလာခဲ့ရင်တော့
"Y" ဆိုပြီးရိုက်ထည့် Enter ခေါက်ပြီး အတည်ပြုပေးလိုက်ပါ။
၁၆။ Unlocking Process ပြုလုပ်နေတုန်းခနစောင့်နေလိုက်ပါ။
အောက်ကပုံမှာတော့ ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်ထားပြီးသားမို့
Already fastboot Unlocked ဆိုပြီးပြပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁၇။ သင့်ဖုန်းမှာ Unlocked ဆိုပြီးပြနေခဲ့ရင်တော့ ဖုန်းကို Reboot ချ
ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းကို Fastboot Mode သို့
Bootloader Unlocked ဆိုပြီးပြနေရင်တော့
သင့်ဖုန်းမှာ Bootloader Unlock ပြုလုပ်ခြင်း ကိစ္စ ပြီးဆုံးပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/14/2016 07:21:00 am0comments
စာအုပ်အမည် - ဟက်ကာလက်စွဲ
စာရေးသူ - ခေတ်၁၀၀
ဖိုင်ဆိုဒ် - 3.5MB
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/09/2016 02:07:00 am0comments
စာအုပ်အမည် - Virus အမျိုးမျိုးသတ်နည်း
စာရေးသူ - ×××××
ဖိုင်ဆိုဒ် - 349KB
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/09/2016 02:02:00 am0comments
စာအုပ်အမည် - အင်တာနက်လိပ်စာများ
စာရေးသူ - သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်)
ဖိုင်ဆိုဒ် - 5.2MB
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/09/2016 02:01:00 am0comments
စာအုပ်အမည် - Android Application ရေးသားနည်း
စာရေးသူ - ထားထားစောလွင်
ဖိုင်ဆိုဒ် - 5MB
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/09/2016 01:56:00 am0comments
All samsung Android 6.0.1 google account /Remove (2016 -frp ) Tools
လင်း-ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် နည်းပညာ Page ကိုနှိပ်ပြီး Like လုပ်ထားပေးပါ.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/03/2016 03:48:00 am0comments
နေရာအနှံက video တွေ mp3 music တွေကို download ရယူရန်Downloader & Private Browser v2.4.4 APK
Facebook, Youtube, Soundcloud နဲ့ အခြားသော video website , music website များစွာမှ video တွေ mp3 music တွေကို download ရယူနိုင်တဲ့ Vidmate ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲ update လေးထွတ်လာလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ facebook ပေါ်က video တွေဒေါင်းယူချင်သူများအတွက် ဖြေရှင်းပေးတဲ့ ဒီ Downloader & Private Browser လေးက facebook တင်မဟုတ်ပဲ အခြား fullmovies တွေ၊ video တွေ music တွေ၊ tvshow တွေ၊ radio ဆိုဒ်များမှပါ ဒေါင်းယူနိုင်အုံးမှာမို့ နှစ်သက်ကြမှာပါ။ နောက်ပြီး ဒီ vidmate လေးထဲမှာမပါသေးတဲ့ အခြား မိမိသိတဲ့ video site , music site တွေကိုလဲ bookmark အဖြစ်သိမ်းဆည်းနိုင်ပြီး အလွယ်တကူပြန်ဝင်ကာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Private နဲ့တော့ folder တွေကို password ခံလို့ရသေတယ်။ မိမိဖုန်းထဲမှ video များကိုလဲ video format များစွာကို ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ video player တခုအနေနဲ့လဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဘာလိုသေးလဲ။ အဆင်ပြေပါစေ.
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/03/2016 03:38:00 am0comments
Huawei Honor7Plus ဖုန်းဗားရှင်း Android 6.0 Marshmallow Root လုပ်နည်း - by CHAN LAY (MCMM)
Huawei Honor7Plus ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားကြတဲ့ ညီအကိုများအတွက်
ဗားရှင်း Android 6.0 Marshmallow Root လုပ်နည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဖုန်းကို Root လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ XDA site မှ SRKTools file ဖြင့်
ကွန်ပျူတာကို အသုံးပြုပြီး One Click Root Method ဖြင့် ပေါက်ပါတယ်။
Download the SRKTools file
၁။ SRKTools file ဖိုင်ကိုဒေါင်းလော့ပြီး ဇစ်ဖြည်လိုက်ပါ။
၂။ ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာကို ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
၃။ SRKTools ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး လမ်းညွှန်အတိုင်းပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
၄။ Rooting process ပြုလုပ်နေတုန်းစောင့်လိုက်ပါ၊ ပြီးရင် Reboot ချလိုက်ပါ။
၅။ ပြန်တက်လာတဲ့အခါ သင့်ဖုန်းမှာ Root Access ရရှိနေပါပြီ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/03/2016 03:28:00 am0comments